Ndeupi musiyano uripo pakati pemvura-yakavakirwa inki uye mafuta-akavakirwa inki yemufananidzo muchina?
Oiri-yakavakirwa inki ndeyekudzora iyo pigment mumafuta, senge yemafuta emafuta, mafuta emiriwo, nezvimwe. Iyo inki inonamatira kune yepakati neoiri kupinda uye kubuda kwemhepo pane yekudhinda svikiro; mvura-yakavakirwa inki inoshandisa mvura senge inopararira svikiro, uye inki iri pane yekudhinda svikiro Iyo pigment yakanamatira kune th ...
Sezvo isu tese tichiziva, yekupisa furo inkjet tekinoroji yakatonga hombe fomati inkjet musika weprinta kwemakore mazhinji. Muchokwadi, piezoelectric inkjet tekinoroji yakagadzirisa shanduko muineti tekinoroji. Iyo yakaiswa kune desktop desktop maprinta kwenguva yakareba. Nekuvandudza uye kukura kwe ...
Nzira yekuchengetedza sei musoro weprinta zvine musoro?
Sechinhu chepakati cheiyo inkjet yekudhinda muchina, kugadzikana kwemusoro wekudhinda zvisina kunangana kunoona mhando yemuchina. Kana iyo yakatarwa mutengo weye anodhinda musoro iri shoma, maitiro ekuwedzera hupenyu hwebasa re ...